यस्ता छन् विश्वकै केहि र्ददनाक सामूहिक बलात्कारका घटनाहरु
फागुन ०४, २०७४ बिगुल
एजेन्सी, सामाजिक अथवा देशकै लागि ठूलो कूरिति बनेको महिला हिंसा पछिल्लो समय एकदमै चर्चामा आएको छ । महिला विरुद्ध हुने यौन शोषण देखि लिएर घरेलु हिंसाले उनीहरुको जीवननै अस्तव्यस्त बनाईदिएको छ । महिलाहरु सामुहिक बलात्कार देखि लिएर अन्या अप्रत्यक्षय यौन शोषणका र्शिषकहरुबाट दबिदै आईरहेका छन् ।
ती सँग सम्वन्धित केही प्रख्यात सामुहिक बलात्कारका घटनाहरू यसप्रकार छन् ।
दिल्लकी निर्भयाको सामूहिक बलात्कार
१६ डिसेम्बर २०१२ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा एक २३ वर्षिय मेडिकल स्टूडेन्ट निर्भया माथि भएको घटनाले पुरै देशलाई स्तव्ध बनाएको थियो । निर्भया माथि भएको अन्याय र अत्याचार प्रति विश्वले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो ।
२३ वर्षीय ती युवती पुरुष साथीहरुसँग फिल्म हेरर फर्किदै थिइन् । घर जाने क्रममा कुनै साधन नपाएपछि उनीले एउटा बसलाई लिफ्ट मागेकी थिइन् । त्यस बसमा रहेका युवकहरुले उनलाई जिस्काउन थालेपछि उनका साथीहरुले त्यसको प्रतिकार गर्न खोज्दा साथीहरुले पिटाई बेर्होनु परेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले निर्भयालाई सबैले मिलेर रेप गरेका थिए । त्यतिमात्रै होईन उनको संबेदनशील भागमा फलामको रड हालेका थिए । त्यसपछि उनलाई दिल्लीको सफदरजंग अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अवस्था नाजुक भएपछि उनको उपचारका लागि सिंगापुर लिइएको थियो । तर उनको त्यही निधन भएको थियो ।
यूक्रेन र ओक्साना मकरको सामूहिक बलात्कार
२०१२ मार्चमा यूक्रेनमा एक कहलिलाग्दो सामूहिक बलात्कार भएको थियो । आफ्नो १९ औं जन्मदिन मनाउँदै नपाउँदै उनको सामूहिक बलात्कार भएको थियो । उनको बलात्कार पछि उनलाई नराम्रोसँग पेटेका थिए ।
बलात्कार पश्चात उनलाई हमलावर ओक्सानाको एक अपरिचित ठाउँमा लिएर उनी माथि आगो लगाएका थिए । उनलाई अर्को दिन भेटिएकी थिइन् र केहि मात्रामा उनको शास चलिरहेको थियो । त्यसको केहि समय पछि उनको निधन भएको थियो ।
एलिजाबेथ र जेनिफरको सामूहिक बलात्कार
संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यको सबैभन्दा ठुलो नगर ह्युस्टनमा आज पनि १९९३ को दिनलाई याद गरिन्छ । १६ वर्षीय एलिजाबेथ र १४ वर्षीया जेनिफरले घर जानको लागि छोटो बाटो अपनाएका थिए । तर उनीहरुको जिन्दगीको अन्त्य भयो ।
रेलरोड ब्रिजमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरुलाई ब्लैक एण्ड व्हाइटको एक गिरोहले घेरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुलाई सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । उनीहरुले रेप पछि उनीहरुको हत्या समेत गरिदिएका थिए ।
जापानिज जंको फुरुताको सामूहिक बलात्कार
१२ नोभेम्बर १९८८ मा १७ वर्षीय जंको फुरुतालाई चार युवकहरुले अपरण गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई एक अपराधीको घरमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो । सामूहिक बलात्कार पछि अपराधिहरुले जंकोलाई ४४ दिन सम्म निकै यातना दिएका थिए ।
जसमा उनलाई पेशाव पिलाएका थिए । उनको यौनीमा पनि फलामको रड हालिएको थियो र जिउँदै जलाईदिएका थिए ।
अस्ट्रेलियाकी अनीता लोरेनको सामूहिक बलात्कार
२६ वर्षीया अनीता लोरेनको २ फेबररी १९८६ मा काम सकाएर घर फर्किने क्रममा सामुहिक बलात्कार भएको थियो । उनलाई रातिको समयमा पाँच युवाहरुले अपरहण गरेरका थिए । उनीको सामूहिक बलात्कार पछि घाटि रेटेर हत्या गरिएको थियो ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ०४, २०७४१८:००
भारतले पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० वटा ट्याङ्कर रोक्यो !
मलेसियाबाट १६ हजार नेपाली फिर्ता, यस्ताे छ खास कारण
मोबाइल एप्सबाट खोल्न र बन्द गर्न सकिने खानेपानीको उद्घाटन
डा केसीको समर्थनमा आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सामूहिक अनशन हुने !
एकै घरमा चारै जनालाई हत्या गरेर आगो लगाइएको पीडित परिवारको दुखेसो !
विद्युत् चुहिएर दुई घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति !
३ मिनेट अगाडि बिगुल
५ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
१८ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
३० मिनेट अगाडि बिगुल
३७ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
४९ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
५९ मिनेट अगाडि बिगुल